Sebenzisa i-aloe vera-Zonke izibonelelo zomzimba wethu | IBezzia
Ngaba uyazi ukuyisebenzisa ikhala vera? Ewe kuyinyani ukuba sijongane nenye yezityalo zeenkwenkwezi ngobuhle kwaye ayisiyiyo encinci. Kodwa namhlanje kuya kufuneka ubhale phantsi ezinye izinto ezininzi ekufuneka uzenzile. Kungenxa yokuba ubuhle ayizukuxhamla kubo kuphela kodwa kukho nezinye ekufuneka uyazi.
Yiyo loo nto, xa sikhankanya ukuba sisingatha esinye sezona zityalo zikhethekileyo, kuyinyani ngokupheleleyo. Kuba isebenzisa izinto ezininzi, nangona kuyinyani ukuba abanye baya kwaziwa ngcono kunabanye. Kungenxa yoko le nto kufuneka sonwabe kuyo yonke into esinika yona, ayisiyonto incinci leyo. Ngaba uyafuna ukufumanisa ngoku?
1 Ikhala vera kubuhle
2 Ungayisebenzisa njani i-aloe vera ngokuchasene nokugaya ukutya
3 Iyanciphisa ukuvuvukala kwintambo
4 Iyanciphisa i-plaque yamazinyo
5 Sala kakuhle kwimilenze ediniweyo
6 Shiya iimpawu zokwaluphala ngasemva
Ikhala vera kubuhle
Mhlawumbi lihlabathi lobuhle apho sifumana khona ukusetyenziswa ngakumbi kunangaphambili kwialoe vera. Kuba iya kwenza phantse yonke into oyifunayo nangaphezulu. Awuyikholelwa? Ewe ngoku sikuxelela ezona zinto zisetyenziswayo ekucetyisweni kwemveliso enje.
Ubuninzi be-hydration kulusu lwakho: Ulusu kufuneka lubukeke luthambile kwaye aluqinanga, ke imveliso enje iya kuyinika yonke i-hydration.
Ku ukucoca ubuso Kukwalungile kuba ukucoca kuya kuba nzulu kodwa kuya kuhambisa ulusu.
Ukuhanjiswa kwamanzi kolusu kubalulekile kodwa kunye neenwele. Ke ngoko, siyabheja ekusebenziseni intwana yale jeli ezinweleni kwaye masiphumle okwemizuzu embalwa kwaye emva koko sibone ukuba ihlala ithambile kangakanani. Kodwa ikwalwa nenkwethu.
Ukuba unayo imilebe eyomileyo, kufuneka uthambise intwana yomgubo wayo kwaye uya kufumana iziphumo ezihle.
Ukunciphisa amanqaku olulekileyo, kuya kufuneka uthambise ngobunono indawo ukuze ubuyisele ukuthamba kolusu.
Ungayisebenzisa njani i-aloe vera ngokuchasene nokugaya ukutya
Al baneempawu zokuthintela ukudumba nokucocaKuya kulungeleka ukuyisebenzisa ngokuchasene nokugaya ukutya. Ngalo lonke ixesha kufuneka uyithathe ngokumodareyitha, kodwa ukuba uxuba malunga ne-500 ye-aloe vera, kunye nekhukhamba encinci, ijusi yelamuni kunye nentwana yeparsley, uya kuba nokudibanisa okugqibeleleyo ukwenza isisu sakho sizive silula.
Iyanciphisa ukuvuvukala kwintambo
Kuyinyani ukuba xa sinengxaki okanye isprain, kufuneka sibonane nogqirha wethu. Kodwa ukongeza kuloo, kuya kufuneka uyazi ukuba i-aloe vera ikwayenye yezithako ezisisiseko zokulwa le ngxaki. Kungenxa yokuba ichasene nokudumba. Ke unokwenza umyalezo okanye usebenzise imveliso encinci kwaye ubophe indawo leyo ukwenza isiphumo esifunekayo sibe ngcono. Ngaba ukhe wayizama?
Iyanciphisa i-plaque yamazinyo
Ukuba unayo nayiphi na ingxaki yesifo emlonyeni wakho, emva koko unokusebenzisa i-aloe vera ukulwa nayo. Kungenxa yokuba kwakhona sithetha ngosulelo kwaye luya kukhathalelwa kwaye lunyange nge-aloe vera encinci kunye namanzi. Sidibanisa yonke into kakuhle kwaye kufuneka sivale le ndibaniselwano. Uya kubona ukuba, ukongeza ekunciphiseni i-plaque yamazinyo, uya kuthi ndlela ntle kwizifo onokuba nazo emlonyeni wakho. Ngapha koko, oku kuhlanjululwa kulungile ngokuchasene nomlomo ombi.
Sala kakuhle kwimilenze ediniweyo
Las imilenze ediniweyo Baza kuziva bexolile ngokuthambisa ngesithako sethu seenkwenkwezi. Ukwenza oku, kufuneka ubeke kuqala kwifriji kwaye emva koko, uya kuwuhlikihla wonke umhlaba obuhlungu. Zama ukuyenza isithambiso esithambileyo kodwa esicothayo ukuze isebenze ukujikeleza njengoko kufuneka.
Shiya iimpawu zokwaluphala ngasemva
Sibuyela kukhathalelo lolusu kodwa isihlandlo sifuna njalo. Kuba kule meko, imibimbi yokuqala iya kunika abanye nzulu ngakumbi ixesha elidlulele. Ngenxa yoko, kufuneka sihlale sikhathalela kakhulu ukuzama ukumisa, kangangoko kunokwenzeka, oku kuguga. Ke, ukuthambeka ngale gel kuvelisa imveliso ye-collagen kwaye iziphumo ziya kuba lulusu oluthambileyo. Ngaba ukhe wazama naliphi na kula maqhinga?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Ungayisebenzisa njani i-aloe vera